China Solar Light–BR series Outdoor Waterproof Landscape Lamp LED Solar Power Garden Light for Pathway Lawn Patio Yard Walkway Roadway Road Courtyard Lighting orinasa sy mpanamboatra |Bright New Energy
Solar Light-BR andiany ivelany 240W 480W 720W 1...
Solar Light–S02B andiany 60W 90W 120W IP65 Inte...
Tany tsy tantera-drano an-kalamanjana-Br...
Solar Light-S01 andiany LED Solar Powered Outdo ...
Jiro masoandro-BR andian-dahatsoratra an-kalamanjana tsy tantera-drano an-tanety Jiro LED jiro avy amin'ny herin'ny masoandro ho an'ny lalan'ny bozaka Patio tokotany lalan-kely lalan'ny lalana lalan'ny lalana Jiro tokotany
Apetraho ao anaty boaty iray ny tontonana solar, jiro LED, controller intelligent ary bateria lithium.Mora alefa, mametraka ary mikojakoja.
Jiro mandeha amin'ny masoandro mitambatra --- manomboka amin'ny 30W ka hatramin'ny 150W
1. Green-angovo avy amin'ny herin'ny masoandro, jiro maitso miaraka amin'ny sensor hazavana
2. Ny angovo ambany, ny fotoana maharitra, ny hazavana avo lenta ary ny fikojakojana maimaim-poana.
3. Fampiharana midadasika kokoa, apetraka mora amin'ny toerana rehetra misy tara-masoandro ampy.
4. Wireless fametrahana, rehetra ao anaty boaty iray, mora ny fandefasana
5. Batterie tsy misy fikojakojana, fiainana 5 taona farafahakeliny.
1. Integrated famolavolana, tsy misy tariby, mora ny fametrahana, ambany ny fitaterana ny vidiny sy ny maro karazana fametrahana, toy ny vy, hazo, volotsangana, plastika;
2. Famatsiana herinaratra avy amin'ny masoandro , jiro LED, ny fitambaran'ny roa tonta, mitsitsy angovo ary miaro ny harenan'ny tany;
3. Ny batterie Lithium maharitra ela velona, ​​ny fiainana ara-teorika amin'ny 8 taona, ny toetran'ny mari-pana tsara, ny fiainana maharitra, mba hahazoana antoka fa ny fiainana manontolo amin'ny vokatra;
4. Fiarovana kilasy IP66, azo antoka sy azo antoka;
5. Quality Aluminum firaka rafitra lehibe amin'ny anti-harafesina tsara sy ny vitsika-harafesiny asa.
6. Ny fanaraha-maso famerana manan-tsaina dia afaka manitsy ny fototry ny herin'ny olombelona, ​​​​mitahiry angovo amin'ny fomba mahomby ary manatsara ny fisian'ny vokatra.
7. Tsy misy metatra elektrika - Miaraka amin'ny jiron'ny masoandro mamirapiratra vaovao, tsy ilaina ny mandrefy ny rafitra jironao.
Midika izany fa mitahiry ny vidin'ny fividianana sy fametrahana metatra ianao, ary ny saram-pifandraisana elektrika.
8. Tsy misy fampiasa elektrônika sy fitakiana sarany - Satria ny jiron'ny masoandro Mamirapiratra New Energy dia Powered Solar tanteraka, tsy mila mandoa vola amin'ny fampiasana herinaratra ianao.
9. Ny androm-piainan'ny hazavana LED dia mihoatra ny 80,000 ora- Mitahiry amin'ny fanoloana takamoa, fikojakojana ary ny vidin'ny fametrahana.
Die fanariana Aluminum + Insulation lelafo retardant plastika injeniera
Apetraho ny haavony
Loharano jiro LED
Vakana jiro LED
NICHIA LED paster
Ny fihenan'ny jiro LED
<0.01% Tsy misy fihenam-bidy mazava ao anatin'ny 3 taona
Herin'ny panneau solaire
fonosana bateria lithium-ion
Rafitra fanaraha-maso mamirapiratra
LED loko mari-pana
Fotoana / andro
Andro fanoherana ny rahona sy ny orana
8 taona mahery
Garantie maimaim-poana mandritra ny 2 taona
Haben'ny fonosana (LWH) mm
teo aloha: Fahazavan'ny masoandro–S01D andian-dahatsoratra Shina miasa amin'ny orinasa Jiro vonjy taitra Jiro vonjy taitra bozaka Maniry Garden Rindrina High Bay Toerana indostrialy Tondra-drano azo tazonina an-dalambe ivelan'ny lalana LED hazavana masoandro
Manaraka: Jiro Solar-XB-GR andiany LED Solar Powered Outdoor Garden Light Jiro 4 metatra ny haavony fametrahana 32W miaraka amin'ny Garantie 2 taona 3 taona
Shina nitarika jiro Krismasy masoandro
China Solar Ceiling Light
China Solar Flashlight Factory
China Solar Traffic Light Factory
China Solar Wall Lights Factory
China Solar Warning Light Factory
OEM Indoor Solar Lights Factory
OEM Solar Panel Garden jiro Factory
OEM Solar Pillar Light Factory
OEM Solar Powered Patio Light Factory
OEM Solar Spot Light Factory
OEM Solar Strip Light Factory
OEM mpamatsy jiro fampitandremana amin'ny masoandro
Ozinina jiron'ny masoandro tsy tantera-drano OEM
Jiro masoandro ivelany
Ozinina jiron'ny masoandro
Solar Light-AL-X andiany ivelany IP65 Wate...
Solar Light-XB-GR andiany LED Solar Powere ...
Fitaovana elektrika–043-2 andiany Governm...
Fitaovana elektrika-XB andiany Portable M...
Inverter-SM andian-dahatsoratra Low Frequency off Grid...
Solar Light–CL-01 andiany Indoor Solar LED...
Tendrombohitra jiron'ny Solar Street, Jiro masoandro amin'ny dobo filomanosana, Flash jiro mandeha amin'ny masoandro, Jiro tondra-drano amin'ny masoandro, Jiro masoandro, Jiro Masoandro tsy tantera-drano,